ကိုရီးယားမှာ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ကျင်းပ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ကိုရီးယားမှာ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ကျင်းပ
½ÃÇèÀåÀ¸·Î º¯½ÅÇÑ Ãà±¸Àå (¾È»ê=¿¬ÇÕ´º½º) È«±â¿ø ±âÀÚ = 4ÀÏ ¿ÀÀü °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ¿Í½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¾È»êµµ½Ã°ø»ç Á÷¿ø °ø°³Ã¤¿ë ÇÊ±â½ÃÇèÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ¾È»êµµ½Ã°ø»ç´Â ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) °¨¿° Â÷´ÜÀ» À§ÇØ Ãà±¸Àå ÇÑ°¡¿îµ¥ ÁÂ¿ì 5m °£°ÝÀ¸·Î 140¿©°³ÀÇ Ã¥»ó°ú ÀÇÀÚ¸¦ ³õ°í ½ÃÇèÀ» ÁøÇàÇß´Ù. 2020.4.4 [email protected]/2020-04-04 11:05:24/
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိ အေဆန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပါ။
COVID- 19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းအသစ် ခေါ်ယူရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲရက်ကို နောက်ဆုတ်နေခြင်းမျိုး၊ ရွေ့ဆိုင်းတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဆိုးလ်မြို့ရှိ အေဆန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ social distancing အတွက် လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ၆ ပေခန့် အကွာထားပြီး စာမေးပွဲစစ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ တောင်ကိုရီးယားမှာ COVID- 19 ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ပြီးလူနာပေါင်း ၁၀၂၈၄ ဦး ရှိနေပြီး သေဆုံးသူဟာ ၁၈၆ ဦး ရှိနေပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယား ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနကတော့ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း ကျဆင်းခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲ နေထိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပြီး စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့လည်း အိမ်မှပဲ အလုပ်လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Previous articleနယူးယောက် တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ ကျားတစ်ကောင်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တွေ့ရှိ
Next articleလှေစီးပြေးသူ ၂၀၂ ဦးကို မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း